Madaafiic khasaaro sababtay oo lala Beegsaday Deegaanka Buulomareer | Baydhabo Online
Madaafiic khasaaro sababtay oo lala Beegsaday Deegaanka Buulomareer
Tiradaan Madaafiicda ah oo lagu weeraray Deegaanka Buulomareer ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka dambeysay kadib markii Ciidanka Dowladda Soomaaliya ay Howlgallo ay ka sameeyeen Nawaaxiga deegaankaasi Buulomareer ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Col Xasan Jaamici oo ka tirsan Saraakiisha Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ee ka howlgala Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa uu sheegay Ciidanka dowladda Soomaaliya ay weerareen fariisimo Dagaalyahanada Al Shabaab ay ku lahaayeen Nawaaxiga degaanka Buulomareer.
Waxaana uu hoosta ka xariiqay in Ciidamada Dowladda ay ka hortageen fariisin Cusub oo Al Shabaab ay ka sameysan rabeen Nawaaxiga deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Sidoo kale Col Xasan Jaamici ayaa xaqiijiyay in 1 qof oo Haweeney ahayd ay ku geeriyootay Madaafiicdaasi lala beegsaday deegaanka Buulomareer halka 8 kalana ay ku dhaawacmeen.
Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee isku dhacyada uu ku dhexmaro Al Shabaab iyo Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya oo xilliyada qaar ay kaabaan Ciidamada MISOM, waxaana isku dhacyadaasi khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa Shacabka deegaanadaasi.